‘Akwenziwe usikompilo ukufunda’ | News24
‘Akwenziwe usikompilo ukufunda’
PHOTO:nokulunga ngobese Umbhali ovelele waKwaZulu-Natal uDkt Gcina Mhlophe ukhuthaze usikompilo lokufunda emcimbini wokugubha izigcinamagugu umhlaba jikelele obuse-KZN museum ngoLwesihlanu.
UMBHALI ovelele ophinde abe yimbongi eyaziwayo eNingizimu Afrika naKwaZulu-Natal, uDkt Gcina Mhlophe uphonsele inselelo abantu bakulesi sifundazwe ngokuthi benze ukufunda kube usikompilo lwabo.
Dkt Mhlophe ukusho lokhu emcimbini wokugubha usuku lwezigcina-magugu umhlaba jikelele (international museums day) obuse-KZN Museum ngoLwesihlanu olwedlule.
Lo mcimbi obuhanjelwe Inkosi Mangosuthu Buthelezi, obekhuluma ngokongiwa kwemvelo nokugcinwa komlando, uqale ngokufundiswa kwabantu ngezihlahla zesintu obekwenziwa uDr Elliot Ndlovu.
Kuphinde kwavulwa ngokusemthethweni umbukiso owaziwa nge-Warren Mammal hall. Lo mbukiso kuhloswe ngawo ukukhuthaza abantu ngokubaluleka kokongiwa nokuhlonishwa kwemvelo. Kuphinde kuhloswe ngakho ukukhalima abantu ekuhlukumezeni imvelo, ikakhulukazi ukuzingelwa kobhejane okungumkhuba osuvamise ukwenzeka.
Ekhuluma nabafundi bezikole ezihlukene zalapha eMgungundlovu uMhlophe uthe: “Iphupho lami elikhulu ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sibe isifundazwe esifundayo. Njengesifundazwe engiphuma kusona, ngifisa ukuthi abantu bakwenze usikompilo ukufunda basebenzisane nohulumeni ekuthuthukiseni izinhlelo zokufunda.
“Nalabo asebebadala abangalitholanga ithuba lokufunda, zikhona nezinhlelo zemfundo yabadala ezingabasiza. Isizwe esifundayo siyazi ngemvelaphi yaso, ngakho kubalulekile nokuxoxela abantwana abasakhula izinganekwane.
“Lokhu kukodwa kuzozigqugquzela ukuba zithande ukufunda.”
Inkosi uButhelezi ibe isinxusa abaholi bendabuko ukuba bazifundise ngomlando ukuze baqhubeke nokuba yizinqolobane zolwazi lo mlando emiphakathini abayakhele.
“Ukongiwa kwemvelo kuyingxenye yesikompilo labantu base-Afrika. Kuyamangaza ukuthi emva kweminyaka emingaka lelizwe lathola inkululeko, kusakhona abantu abangayihloniphi imvelo.
“Sikhule sazi ukuthi isikhumba sengwe sigqokwa abantu abathize kuphela. Kepha manje sesigqokwa yinoma ngubani, okwenza abanye bagcine sebezingela lezi lwane ngokungemthetho esikhundleni sokuba bavikele imvelo.”